नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा अभिनेता–अभिनेत्री एक्सनमा को कस्तो ? - Naya Patrika
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा अभिनेता–अभिनेत्री एक्सनमा को कस्तो ?
राजेन्द्र खड्गी नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा लामो समय एकछत्र राज गरेका द्वन्द्व निर्देशक हुन् । ०४० मा ‘विश्वास’ चलचित्रबाट फिल्मी करिअर सुरु गरेका खड्गीले पाँच सयभन्दा बढी चलचित्रमा द्वन्द्व निर्देशन र अभिनय गरका छन् । फिल्मी क्षेत्रमा ३५ वर्ष लामो संघर्षमा उनले थुप्रै कलाकारसँग काम गरे । थुप्रै अभिनेता–अभिनेत्रीको द्वन्द्व अभिनयमा खड्गीको निर्देशन रह्यो । एक्सनमा उनीहरूको खुबीलाई नजिकबाट चिन्ने मौका पाए । एक्सनको पाटोबाट केही अभिनेता–अभिनेत्रीलाई खड्गीले नयाँ पत्रिकाका महेश तिमिल्सिनासँग यसरी सम्झिए :
राजेश हमाल : हामफाल्नै डराउने
मैले राजेश हमालसँग ‘युगदेखि युगसम्म’ चलचित्रबाट काम गर्न सुरु गरेको हुँ । उनीसँग मैले थुप्रै चलचित्रमा काम गरेको छु । एकताका राजेश र म भएको फिल्म निकै हिट हुन्थे । राजेशलाई फिल्ममा हेर्दा एक्सनमा निकै राम्रो देखिन्छ, तर रियलमा त्यस्तो होइन । उनी अग्लो ठाउँबाट हामफाल्नुपर्‍यो भने निकै डराउँछन् ।
‘पालेदाइ’को सुटिङका क्रममा एउटा सिन जंगलमा लिनुपर्ने थियो । त्यो वेला हामीले त्यसको सुटिङ सौराहाको जंगलमा गर्ने तय गर्‍यौँ । हामीले त्यहाँ बन्दुक पनि पड्काउनुपर्ने थियो । तर, बन्दुक पड्काउँदा जनावर तर्सिन्छन् भनेर निकुञ्जले सुटिङ नगर्न अनुरोध गरेको थियो । त्यहाँ मैलेचाहिँ पेलेरै गर्ने सोच बनाएको थिएँ । तर, राजेश डराए । उनी त्यहाँ जाँदै गएनन्, अनि हामीले लोकेसन परिवर्तन गर्नुपरेको थियो । राजेश यस्ता कुरामा निकै संवेदनशील पनि छन् । तर, व्यक्तिगत हिसाबमा भन्नुपर्दा उनी ‘जेन्टलमेन’ छन् ।
उनले धेरैजसो समय होस्टेलमा बिताए । यसकारण पनि उनको जीवनशैली अरूको भन्दा अलि फरक थियो । तर, फिल्ममा फाइटको सुटिङ गर्दा उनको हातबाट कोही घाइते भयो भनेचाहिँ उनी सरी भन्दैनन् । उनको नराम्रो बानी भनेको यही हो ।
शिव श्रेष्ठ : साह्रै सुरो
शिव दाइ नेपाली चलचित्र क्षेत्रका एक्सन किङ नै हुन् । उहाँबाट कोही कलाकार पनि घाइते भएनन् । उहाँले टाइमिङ मिलाउनुहुन्छ । करियर नेपाली चलचित्रबाट सुरु गरे पनि पाकिस्तानी फिल्ममा पनि एकछत्र राज गरेर बस्नुभएको हिरो हो । उहाँसँग मैले ‘विश्वास’ चलचित्रबाट सँगै काम सुरु गरेको हो । एक सयभन्दा धेरै चलचित्रमा उहाँसँगै अभिनय गरेको छु । एकदमै राम्रो अभिनेता हुनुहुन्छ । मैले उहाँसँग धेरै संगत गरेँ । निकै मिलनसार स्वभावको मान्छे । हाम्रो पारिवारिक सम्बन्ध पनि असाध्यै राम्रो छ । उहाँ सुरो अभिनेता हो । जहाँबाट भने पनि हामफाल्न तयार हुनुहुन्थ्यो ।
निखिल उप्रेती : आँटिलो र डरपोक दुवै
निखिल उप्रेतीसँग ‘कर्तव्य’ चलचित्रबाट काम गर्न सुरु गरेको हो । उसको एक्सन पनि निकै राम्रो छ । तर, निखिलमा एक प्रकारको आँट पनि छ र भित्र डर पनि । व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने निखिल निकै राम्रो मान्छे हो । तर, ऊ अरूको कुरा सुन्दै हिँड्नाले बिग्रियो भन्ने मलाई लाग्छ ।
निखिल एकताका निकै चर्चामा आयो । उसले अरूको कुरा नसुनेर सबैलाई रिझाएर काम गरिरहेको भए अहिले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा ‘वान म्यान आर्मी’ हुन्थ्यो । निखिल ‘पिँजडा’ फिल्ममा सात तलाबाट हामफालेर निकै चर्चा आएको थियो । तर, ‘भाग्यविधाता’ फिल्ममा नारायणी पुलबाट हामफाल्न निकै डराएको हो । त्यो फिल्ममा नक्कली प्रयोग गर्नुपरेको थियो ।
धीरेन शाक्य : अनलक्की
धीरेन शाक्यसँग मैले ‘सिमाना’ चलचित्रबाट काम गर्न सुरु गरेको हुँ । उनीसँग मैले लगभग ७५ वटाजति चलचित्रमा काम गरेको छु । करातेमा धीरेन मेरै चेलो हो । धीरेन अभिनय र एक्सनका लागि सबै चिज भएको, तर भाग्यले भने ठगेको हिरो हो । किनभने, उनीसँग हिरोमा हुने सबै गुण छ, तर अभिनय गरेका चलचित्रले स्थापित गराउन सकेन । त्यसैले म उनलाई अनलक्की हिरो भन्छु ।
रमीत ढुंगाना : बचपन स्वभावको
रमीत ढुंगानामा हिरोमा हुने सबै गुण छ । तर, उनमा बचपना देखिन्थ्यो । रमीतलाई मैले ‘मनमा माया’, ‘दुर्गा’, ‘हिफाजत’, ‘देवरबाबु’लगायतका चलचित्रमा एक्सनमा लिएको छु । उनी परिवारको कान्छो छोरा पनि हुन् । त्यसैले होला, उनमा बचपना देखिन्थ्यो । तर, उनको फिगरचाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ ।
विराज भट्ट : फाइटमा राम्रो
वास्तवमा भन्ने हो भने विराज भट्टलाई स्टार बनाएकै मैले हो । विराज पनि एकताका हिट भएको हिरो हो । उनलाई मैले ‘रघुवीर’, ‘देवरबाबु’, ‘चिनो’लगायत चलचित्रमा हिरोका रूपमा लिएँ । विराज फाइटमा एकदमै राम्रो भएको अभिनेता हो । निखिलले मसँग निहुँ खोजेपछि उनलाई ल्याएको हो । तर, विराज भट्ट पनि हामफाल्नचाहिँ डराउँछन् । उनलाई नेपाली दर्शकले अभिनेताका रूपमा खासै नरुचाए पनि भोजपुरी फिल्ममा धेरै हिट भए ।
रेखा थापा : केटा स्वभावकी आँटिली
रेखा थापालाई छविराज ओझाले जहिले पनि साइड रोलमा अभिनय गराउँथे । तर, मैले उनलाई ‘दुर्गा’ फिल्ममा मुख्य भूमिकामा ल्याएँ । जब मैले त्यो फिल्ममा रेखालाई एक्सन गराएँ, त्यसपछि त उनी स्टार भइहालिन् नि ! त्यसपछि मात्र छविराज ओझाले ‘हिम्मत’मा उनलाई मुख्य भूमिका दिएका हुन् । रेखा मनमा पाप नभएकी अभिनेत्री हो । स्वभाव पनि हक्की छ । वास्तवमा भन्ने हो भने रेखा केटा स्वभाव भएकी आँटिली र हक्की स्वभावकी अभिनेत्री हो । उनलाई मैले ‘हिम्मत’ फिल्ममा बञ्जीजम्प पनि गर्न लगाएँ, मज्जासँग गरिन् । मेरो नजरमा रेखा थापा जताबाट हेरेपछि आँटिली अभिनेत्री हुन् ।
गौरी मल्ल : अभिनयजस्तै एक्सन
गौरी मल्ललाई म अभिनयको साम्राज्ञी भन्न रुचाउँछु । अभिनयमा तगडा अभिनेत्री हुन् । अभिनयमा अहिलेसम्म पनि त्यत्तिको कोही छैन । तर, उनी अलि सन्की स्वभावकी छिन् । उनलाई मैले ‘सरस्वती’ चलचित्रमा इन्सपेक्टरको भूमिकामा लिएको थिएँ । अभिनय असाध्यै राम्रो गरिन् । त्यो वेला सरस्वती चलचित्र हिट पनि भयो । उनीसँग मैले ‘सरस्वती’, ‘स्वर्ग’लगायतका चलचित्रमा सँगै काम गरेको छु । गौरीको अभिनयका साथै एक्सनमा पनि असाध्यै राम्रो छ ।
अर्जुन कार्की : भनेपछि गरिहाल्ने
मैले अर्जुन कार्कीसँग थोरै फिल्ममा मात्र काम गर्ने मौका पाएँ । मैले उनलाई ‘पापी’ चलचित्रमा एक्सनमा लिएको थिएँ । एक्सन निकै राम्रो गरेका थिए । हामफाल भनेपछि हामफालिहाल्ने ।
आँटिलो स्वभावकै कारण पछि सगरमाथा आरोहण पनि गरे । मेरो चेला नै हो । पढेलेखेको व्यक्ति पनि हो । अरूलाई सम्मान गर्न जान्ने निकै राम्रो स्वभाव छ ।
दिनेश शर्मा : एक्सन राम्रो, भाग्य नराम्रो
दिनेश शर्मालाई हिरो बनाइदिएको मैले नै हो । मैले उनलाई ‘चट्याङ’ फिल्मबाट लिएको हुँ । त्यो फिल्ममा उनलाई नै लिनुको पनि छुट्टै किस्सा छ । खासमा मलाई दिनेश शर्मा सलमान खानजस्तै लाग्थ्यो । मैले एक दिन उनलाई सलमान खानसँग भेटाएँ । सलमान खान नै दंग भएर ‘दिनेश त मभन्दा पनि राम्रो छ’ भन्नुभयो ।
लुक्स राम्रो भएको दिनेशको एक्सन पनि उत्तिकै राम्रो हो । उनलाई लिएर गरेको ‘टुहुरो’ चलचित्र हिट भयो । तर, दिनेश पनि अनलक्की अभिनेता हो । किनभने, मुख्य भूमिका कहिल्यै पाएनन् । जहिले पनि सपोर्टिङ भूमिकामा अभिनय गर्नुप¥थ्र्यो ।
आयुष रिजाल : फाइटर स्वभाव
आयुष रिजाललाई मैले ‘हिफाजत’, ‘जलजला’ चलचित्रमा काम गराएको छु । उनी पनि मेरा चेला हुन् । फाइटर स्वभावको अभिनेता हुन्, आयुष । अरूसँग के हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर मलाईचाहिँ सम्मान गर्छन् ।
रमेश उप्रेती : भाग्यमानी
‘यो मायाले लौन सतायो’मा श्रीकृष्ण श्रेष्ठ हिरो र रमेश उप्रेती भिलेनको भूमिकामा थिए । रमेश एक्सनमा राम्रो गर्न सक्ने क्षमता भएको अभिनेता हो । उनीसँग मैले धेरै चलचित्रमा काम गरेको छु । रमेश पनि एकदमै राम्रो स्वभाव भएको अभिनेता हो । केही समयपहिला मैले उनको अन्तर्वार्ता हेरेको थिएँ । अन्तर्वार्तामा उनले तासमा ४० लाख हारेर अमेरिका गएको भनेका रहेछन् । अमेरिका गएका उनी फेरि पनि चलचित्र क्षेत्रमा आएर सफलता पाएका छन् । त्यसैले म उनलाई लक्की अभिनेताका रूपमा लिन्छु ।
कृष्टी मैनाली : पहिलो नम्बरमा हुन्थिन्
कृष्टी मैनाली अमेरिका नगएको भए अहिले एक्सनमा नेपालको नम्बर वान अभिनेत्री हुन्थिन् । उनको त्यो वेलाको क्षमता देखेर म अहिले भन्दै छु । कृष्टीसँग मैले ‘युगदेखि युगसम्म’, ‘धर्म’लगायतका चलचित्रमा काम गरेँ । धर्म चलचित्रमा उनकोे एक्सन निकै हिट भयो । कृष्टी आफ्नो काममा समर्पित हुने अभिनेत्रीमध्ये एक हुन् ।
सुशील क्षेत्री : एक्सनमा कला भएको
मैले सुशील क्षेत्रीसँग ‘भाइ’, ‘आगो’लगायत चलचित्रमा काम गरेँ । सुशील अभिनय र एक्सनमा निकै राम्रो कला भएको अभिनेता हो । साथै, म उनलाई सोझो नायकका रूपमा पनि लिन्छु ।